> Resource > Lugood > Sidee si ay u gudbiyaan iibsaday Items ka iPad in Lugood
dukaanka Lugood waa ilaha wanaagsan oo duuban iyo wax gadashada alaabta, sida music, podcast, audiobook, video, Lugood U iyo ka badan, waxaan jeclahay oo badan si aad nolol maalmeedka oo ku keenaa. Tan iyo markii ay soo iibsatay waxyaabaha lagu ilaalinayo ilaalinta Apple FailPlay DRM, aad oo keliya loo oggol yahay inay alaabta ka mid ah aad iPhone, iPad iyo iPod. Sidaas darteed, si ay u dhawrto waxyaabaha iibsaday ammaan ah, waxaa dhici karta inaad doonayso inaad ku wareejiso maktabadda Lugood.
Si aad u gudbiyaan waxyaabaha soo iibsatay ka iPad maktabadda Lugood, waxaad kala socon kartaa qaybta 1aad ee hoose. Ka sokow wax ka iibsaday, haddii aad sidoo kale doonayaa in aad nuqulka waxyaabaha soo iibsaday oo aan, waxaad ka akhrisan kartaa Part 2.
Qaybta 1. Transfer iPad u iibsaday inay Lugood maktabadda
Qaybta 2. Transfer iPad oo aan u iibsaday inay maktabadda Lugood
Qaybta 1. Transfer iPad u iibsaday inay maktabadda Lugood
Tallaabada 1. ogolaato kombiyuutarka
Haddii aad idman kombiyuutarka, fadlan ka gudub talaabada. Haddii aan, raac tallaabada.
Burcad Lugood on your computer. Tag Store menu. In liiska jiido-hoos, dooran ogolaato Computer Tani ... .Taasi waxay ku keenaa sanduuqa wada hadal ah. Ku qor ID Apple iyo password in aad isticmaasho si aad u iibsato alaabta aad. Haddii waxyaabaha aad soo iibsatay iyada oo badan IDs Apple, waxaad u baahan tahay in ay awood u computer mid walba.
Fiiro gaar ah: Waxaad awood u kartaa kombiyuutar 5 xisaab Apple ugu badnaan.
Tallaabada 2. Nuqul iPad u iibsaday inay maktabadda Lugood
Connect aad iPad in kombiyuutarka. Ka dib markii la ogaado by Lugood, aad iPad soo bixi doona hawlgallada Qalabka khaanadda bidix. Midig u guji aad iPad iyo dooran Transfer iibsaday liiska hoos-hoos.
Marka ay timaado in wareejinta alaabta iibsaday oo aan ka iPad maktabadda Lugood, Lugood soo baxday in ay ciirsi. Xaaladdan oo kale, aadka u tahay in aad lagu talinayaa in ay ku tiirsan yihiin software xisbiga saddexaad, ee TunesGo Wondershare (version Windows) ama TunesGo Wondershare (Mac) . Software Tani waxay mid aad u fudud si ay u gudbiyaan oo aan ku iibsaday iyo iibsaday music, filimada, podcasts, Lugood U, audiobook iyo kuwa kale dib ugu maktabadda Lugood.
Hadda waxaan jeclaan lahaa in ay ku tusaan sida ay u gudbiyaan waxyaabaha ka iPad maktabadda Lugood leh version Windows ah. Riix badhanka si ay u soo bixi software ah.
Tallaabada 1. Connect iPad iyo abuurtaan software
Burcad software TunesGo ka dib markii la rakibey la dhamaystiro. Bareesada in cable USB ah in ay ku xidhmaan aad iPad in PC. Marka garashada aad iPad, software waxa ku tusi doonaa in uu furmo suuqa hoose.
Fiiro gaar ah: Ogow: Ka hor inta aan laga iPad wareejinta alaabta u iibsaday inay maktabadda Lugood, waxaad eegi kartaa iPad. Software ayaa si fiican u la shaqeysaa iPad bandhigay isha, iPad, iPad 2, iPad mini iyo iPad New in la macruufka 5, 6 & 7.
Tallaabada 2. Transfer ka iibsaday oo aan ahayn iibsaday ka iPad in Lugood
Iibsiga alaabta oo dhan mar:
Dhinaca hoose ee suuqa kala aasaasiga ah ay helaan hawlaha ugu muhiimsan ee software-ka. Haddaba taga oo u ka heli Copy iDevice in Lugood. Ka dib waxaa gujinaya, waxaad ka heli daaqad yar oo booda. Guji Start. Markaas, dhammaan alaabta (ka iibsaday oo aan ahayn iibsaday) ma Lugood ayaa la hubinayaa. Waxaad uncheck kartaa alaabta aadan rabin. Markaas, guji Copy in Lugood.
Waxyaabaha Copy mid mid:
Kaalay column ka tegey, guji Media. Sida aad ka arki, music, filimada, Lugood U, podcast, audiobook, music video waxaa lagu muujiyey on line ugu sareeya. Dooro nooca warbaahinta ah oo ay doortaan files way ka hoosaysaa.
Riix dhoofinta in> dhoofinta in Lugood Library. Marka aan sidaa yeelno, si aad u Lugood ay ka mid yihiin kuwa ka jira maktabada Lugood wareejin karaan alaabta oo dhan.
Riix Smart dhoofinta in Lugood. Software Tani waxay ka boodi doonaa waxyaabaha jirtay maktabadda Lugood waxa kaliya oo ay u gudbiyaan kuwa kaliya ee aad iPad.
10-tuuryo keyboard Lugood aad ka ogaato